ट्राफिक प्रहरीका लागी टाउको दुखाइ बने यी ब्याक्ति, यसकारण गल्ति भेटे पनि कारवाही गर्न सक्दैन ! – ताजा समाचार
ट्राफिक प्रहरीका लागी टाउको दुखाइ बने यी ब्याक्ति, यसकारण गल्ति भेटे पनि कारवाही गर्न सक्दैन !
नयाँ दिल्ली । भारतमा नयाँ परिवहन नियम लागू भएपछि त्यसले कैयन व्यक्तिलाई समस्यामा पारेको छ । कतिपय स्थानमा निकै चर्को जरिवाना तिर्नुका साथै जेल जाने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । अहिले दिल्लीदेखि पञ्जाब र उत्तरप्रदेशदेखि दक्षिणका राज्यहरुमा नयाँ नियम कडाईका साथ पालना गरिएपछि चौतर्फी आतंक नै फैलिएको छ । तर ट्राफिकले जति कडाई गरे पनि एकजना व्यक्तिलाई भने कसैले केही गर्न सक्दैनन् । उनी हेल्मेट नै नलगाई जान्छन् । प्रहरीले रोक्छन् तर कार्वाही गर्नुको साटो उल्टै आफ्नो टाउको पिट्न थाल्छन् ।
गुजरातका जाकिर मेमन अहिले प्रहरीका लागि टाउको दुखाईका विषय बनेका छन् । गत केही दिन उनलाई प्रहरीले रोक । किन हेल्मेट नलगाएको भनेर सोधे तर जाकिरले उल्टै प्रहरीलाई भने– कसले भन्यो र नलगाउने भनेर ? मेरो टाउकोको साइजको हेल्मेट ल्याइदिनु न ।
उनी अरु सबै कागजात बोकेर हिंड्छन् तर उनको टाउकोको साइजको हेल्मेट बजारमा नपाइने भएकोले हेल्मेटका लागि भने केही गर्न सक्दैनन् । प्रहरीले सोधेको जवाफमा उनले भन्छन– धेरै पसलमा जाँदा पनि मेरो साइजको हेल्मेट पाइन्न । अनि मैले के गर्ने ? नियम पालना नै गर्ने हो भने मलाई मेरो जत्रै हेल्मेट खोजिदिनु । मैले ड्राइभ नै नगर्ने भन्ने त हैन होला नि ?
नयाँ मोटर परिवहन नियम अुनसार हेल्मेट नलगाई यात्रा गरेमा एक हजार भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । केही समय अगाडि त दिल्लीका एकजना युवालाई बाई चलाएको बेला गीत सुनेको आरोपमा समेत जरिवाना काटिएको थियो ।